Umntu omnye wabulawa, abaninzi benzakala kuqhushumbo lwebhasi yaseUganda
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » Umntu omnye wabulawa, abaninzi benzakala kuqhushumbo lwebhasi yaseUganda
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseUganda
Umntu omnye wabulawa, abaninzi benzakala kuqhushumbo lwebhasi yaseUganda.
Uqhushumbo lwebhasi lwenzeke kwiintsuku nje ezimbini emva kwebhombu eye yabulala umntu omnye kwaye yenzakala abathathu kwindawo yokutya esecaleni kwendlela kwikomkhulu laseKampala ngoMgqibelo, apho amapolisa ayibiza ngokuba "sisenzo soloyiko lwasekhaya".
Ukudubula kwebhasi kufutshane neKampala kubulale umntu omnye kwaye kwenzakalise abanye abaninzi.
Uhlaselo lwebhasi lulandela ibhombu ebulalayo eKampala, ibango le-ISIL (ISIS), eye yabulala umntu kwaye yenzakalisa abathathu.
Iingcali zamapolisa aseUganda ziphanda ngemeko yokudubula kwebhasi eLungala.
Umkhosi wamaPolisa ase-Uganda ubhengeze ukuba umntu omnye wabulawa kwaye abantu abaninzi benzakala kuqhushumbo lwebhasi kufutshane nekomkhulu lelizwe. Kampala.
Uqhushumbo olubulalayo kwibhasi yenkampani iSwift Safaris lwenzeke namhlanje, malunga nentsimbi yesihlanu ngexesha lalapha ekhaya.
Abantu abathathu bangene kwindawo yokutya apho inyama yehagu yosiwe kwaye bashiya iplastiki enezinto eziye zagqabhuka kamva.
Amapolisa akakabhengeza mntu ukuba ubanjwe.
Iqela le-ISIL (ISIS) libanga uxanduva lohlaselo lwaseKampala.
Iingcali zamapolisa aseUganda zithunyelwe kwindawo ekuqhushumbiswe kuyo ibhombu eLungala ukuya kuphanda ngesi qhushumbisi.
ILungala imalunga nama-35km (iikhilomitha ezingama-22) entshona ye Kampala, kwenye yezona ndlela zixakekileyo zeli lizwe, ezidibanisa iUganda neTanzania, iRwanda, iBurundi kunye neDemocratic Republic of Congo.
Ngokutsho kwesithethi samapolisa, indawo yexhwayelo ivalekile kusalindwe uvavanyo olucokisekileyo kunye nophando olwenziwa ziingcaphephe zebhombu, kwaye amapolisa aya kuthi ngamaxesha athile anike uhlaziyo malunga nesi sehlo.
Amapolisa aseUganda aphinde akhupha isilungiso esithi umntu omnye ubulewe kuhlaselo, emva kokuba ingxelo yangaphambili ithi abantu ababini babhubhile.
Umongameli waseUganda uYoweri Museveni kwi-tweet uthe "ukuzingela" abenzi bobubi kuyaqhubeka kwaye "imikhondo icacile kwaye ininzi".